Play Video QuickTime on iPad / iPhone / Android habsami leh
Sida loo Play Video QuickTime on iPad / iPhone / Android
QuickTime waa ciyaaryahan ee kombiyuutarada inuu u ciyaaro qaabab kala duwan. Ma jiraan wax QuickTime ee macruufka ama QuickTime u Android. Haddii aadan ka ciyaari karaa flash video ama ma furi kartaa Email QuickTime aad iPhone, iPad, ama Android, in aad sidoo kale ka heli kartaa app ciyaaryahan video ah oo taageera QuickTime video, ama badalo QuickTime video inay qaab waa la jaan aad qalab.
Qeybta 1: Hel ah Video Player App taageera QuickTime Video
Qeybta 2: Beddelaan QuickTime Video inay qaab la jaan Your Device
VLC waa ciyaaryahan caan ah oo kala duwan ee files warbaahinta taageeray. Waxaad isticmaali kartaa sida QuickTime ah iPad, QuickTime u iPhone, ama QuickTime u Android. Waxaa ka ciyaari kara wax kasta oo ku dhowaad video la codecs wax kasta oo sida DivX ama H.264, ama qaabka avi, mkv, mp4, wmv, iyo in ka badan. No spyware, ad, ama user statistics, kaliya aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si aad u isticmaasho.
Wixii macruufka Wixii Android
Sida ciyaaryahanka feature-hodan warbaahinta ah, waxaad soo jawaabin karaa KMPlayer inuu u ciyaaro videos in qaab kasta, oo ay ku jirto DVD iyo content Blu-ray. Waxaa xitaa ka ciyaari kara videos 3D oo u soo jeesan 2D video illaa 3D. Soo qaado tan laternative in QuickTime u iPad, iPhone ama Android inuu u ciyaaro aad playlist, video iyo music.
Sida ciyaaryahanka QuickTime sare u socon iPad, iPhone iyo Android, waxaa ciyaari karaa inta u dhaxaysa macruufka iyo qalab kale oo badan oo Android oo aan wax codec dheeraad ah. Waxaad isticmaali kartaa inuu u ciyaaro video, audio iyo xitaa DVD files qeexidda sare. Ciyaaryahanka Tani aad ku talin ugu caansan videos ka goobood video qaybsiga sida YouTube, VEVO iyo Hulu, waxaad bixinta habka ugu fudud in la ogaado filimada aad ugu jeceshahay.
App waa ku weyn yahay, waayo, channels geeyo. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad u ciyaaro deegaanka video files ka dib wareejinta videos in aad iPhone ama iPad via Lugood file kala iibsiga. Waxa ugu xiisaha badan waa in RockPlayer2 ha karo aad la wadaagto videos u dhexeeya qalabka socon.
Waa ciyaaryahan kale oo la jaan qaada iPad, iPod iPhone iyo taabashada macruufka QuickTime. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad heli filim ama music kaydsan qalabka macruufka aad, oo uu u ciyaaro wax walba si habsami leh. Tani dhab ahaantii waa app la yaab leh!
Waxaad ku rakiban kartaa si fudud ciyaaryahan QuickTime, waayo, Android ka dibna la kulmi videos qeexitaanka sare flawlessly. Waxaad ku qaadan kartaa sidii ciyaaryahan MP4 lacag la'aan ah, ciyaaryahanka Mp3! RealPlayer sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad ka raadin videos online ka YouTube, Bing iyo goobaha kale ee uu u ciyaaro video kasta oo aad jeceshahay.
Ciyaaryahanka MX maalkeeda sumcad ku dhex Android isticmaala. Waxa ay taageertaa codecs oo caan ah iyo qaabab video, oo ay ku jiraan 3gp, avi, wmv, mkv, mp4, mpeg, MOV, iwm Waxaad si fudud u ciyaari karaa QuickTime video kasta telefoonka Android ciyaaryahanka bilaash ah. Waxaa la aqoonsan yahay sida ugu fiican-wax-All Movie Player Wixii Android.
Gacan-jabis karto files ugu badan ee multimedia oo DVD ah ama ilo BluRay in aadan ku jira ilaalinta nuqul. Iyadoo presets dhisay-in u iPhone, iPad, iPod ama, aad si fudud u bedeli karaan QuickTime video qalabka tufaax adiga oo aan wax dadaal ah, ciyaaro QuickTime on iPad, iPhone, ama Android marna dhibaato ah.
Waxaa badasha videos at 30X xawaaraha si dhakhso ah oo la AAN tayada khasaaro. Just jiidi aad video galay waxaa, oo aad qalab iPhone ama iPad ama Android sida qaab saarka la filaayo in presets, ka dibna bilowdo si loogu badalo. Iyada oo ay awood boosaska badan, waxaa loo aqoonsan yahay QuickTime ugu fiican ee iPad, iPhone ama Android Converter.
Edit video: goo, dalagga, ku dar Cinwaan ama saamayn si astaysto video hab sahlan yahay iMovie ama Pro Goo Final.
Guba DVD: Gubashada kasta video inay DVD in ay ku raaxeystaan ​​ku DVD ciyaaryahan aad.
Presets badan: Bixi presets u iPhone, iPad, qalabka Android leh noocyo kala duwan.
Transfer badaley video via wifi dhexeeya your computer iyo qalab.
Download Wixii Mac Download Wixii Windows
Raadinta wax fudud? Just heli iSquint halkan sida aad QuickTime u iPad ama iPhone Converter. Waxaa maalkeeda caan la interface ka Waano. Kaliya in aad soo jiidi kartaa in aad file, oo wuxuu u yeelay qaab wax soo saarka aad, ka dibna riix bilaabi si loogu badalo aad video QuickTime qalabka macruufka aad.
App Tani waa QuickTime kale iPad, iPhone ama Android Converter. Waxaa loogu badalo kartaa video kasta oo QuickTime in aad qalabka iPhone, iPad ama Android. Ka sokow, waxaa ku caawinaysa in kor video leh filtarrada kala duwan. Waxay yaraynaysaa tirada aad video iyo maqal ah la muujinta riixo sameecadda ah. Dhinaca kale codsigan waa in habka loo xirxiro ayaa qaadata waqti aad u badan.
Hel converters QuickTime More >>
> Resource > QuickTime > Sidee u ciyaaro QuickTime Video ku iPad / iPhone / Android